भेन्टिलेटरबाट कोरोना जितेर फर्किएकी ५२ वर्षीया आमाको अनुभव
गत वैशाख १९ गतेदेखि मलाई ज्वरो आइरहेको थियो । २२ गते अचानक श्वास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो । त्यो देखेर घरका सबै जनाले ‘अब घरमा बस्नुहुन्न, अस्पताल जानुपर्छ’ भन्ने निर्णय गर्नुभयो ।
घरको ढोकामा एम्बुलेन्स आइपुग्यो । मैले निस्कने बेलामा पुलुक्क घडी हेरे १०ः३० बजेको रहेछ । अगाडि–अगाडि मेरो एम्बुलेन्स, पछाडि मोटरसाइकलमा छोराहरू ।
हामी पाटन अस्पताल पुग्यौं । तर त्यहाँ बेड नभएकाले भर्ना पाइएन । सहयोगी आफन्त, साथीभाइले फोनबाट पनि सक्दो प्रयास गरिरहनुभएको थियो । तर आधा घण्टाको प्रयासपछि केही सीप लागेन ।
हामी फर्कियौं र टेकु अस्पताल पुग्यौं । मेरो छोरा पटक–पटक मलाई आश्वासन दिँदै भन्थ्यो – हजुरलाई केही हुँदैन ।
उसका भरिएका आँखामा १० दिनसम्म नर्भिक अस्पताल बसेर ११ औं दिन २०७० कात्तिक १३ गते बुवा बितेका र अब आमालाई गुमाउनु नपरोस् भन्ने भावना प्रस्टै झल्किन्थ्यो । टेकु अस्पतालमा धेरै बेरको प्रयासपछि एउटा बेड पाइयो ।
छोरो खुशी थियो । डाक्टर आउनुभयो र मलाई अक्सिजन लाएर जानुभयो तर मलाई झन्भन् गाह्रो हुन थाल्यो । अब मलाई इमर्जेन्सीको १ नम्बर बेडमा सारियो र त्यहाँ विभिन्नथरि मशिनहरू लाएर राखियो ।
उपचार चलिरहेका बेला २५ गते अचानक मेरो अक्सिजन एकदमै कम भयो र म बेहोस भए । अब मेरो स्थिति एकदमै गम्भीर भयो । धन्य ! टेकु अस्पतालका डाक्टर टीम सबै जना भेला भएर मलाई बचाउने प्रयासमा लाग्नुभयो ।
मलाई अलि–अलि केही थाहा हुँदै थियो । डाक्टर अनुप सरल, मृदुभाषी, सहयोगी, मर्मस्पर्शी, सहनशील । उहाँको जति वर्णन गरे पनि कम होला जस्तो लाग्छ मलाई ।
अब उहाँ मसँग बोल्न र प्रश्न गर्न थाल्नुभयो । किनभने मैले नबोले सायद जे पनि हुन सक्थ्यो ।
डाक्टरको पहिलो प्रश्न – यो नानी को हो ?
मेरो जवाफ – मेरो भान्जी (सबिना)
दोस्रो प्रश्न – उ को हो ?
म – मेरो छोरा ।
तेस्रो प्रश्न – अमेरिकामा को हुनुहुन्छ ?
म – मेरो ज्वाइँ
यति बोल्दा मेरो होस हरायो । अस्पतालमा मैले आफ्नै बारेमा केही थाहा नपाएपनि म निको भएर आएपछि छोराले मलाई सबै बतायो ।
अब मलाई बचाउन भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्‍यो तर कतै पनि भेन्टिलेटर पाइएन । नपाएपछि बचाउने आशा कम भयो तर ईश्वरको कृपा मलाई माया गर्नुहुनेहरूको प्रार्थना मिल्यो । डाक्टर र मेरो परिवारमा आशाका किरण पलाए । डाक्टर टीमले मलाई बचाउन सक्दो प्रयास गर्नुभयो ।
यसरी प्रत्येक दिन डाक्टर अनुप आएर मेरो ढाडमा धाप मार्दै भन्नुहुन्थ्यो, आमा तपाईं नआत्तिनुहोला, केही हुँदैन । उहाँको धापले ममा साहसको ऊर्जा थपिन्थ्यो ।
बिस्तारै ममा केही सुधार हुन थाल्यो । मेरो बेड नम्बर १ थियो । मेरो परिवार वरिपरि ५ वटा बेड थिए । म भेन्टिलेटरबाट हेरिरहन्थें । छेउछाउको बेडमा १ दिनमा १ जनासम्मको मृत्यु भयो ।
पहिला मलाई थाहा भएन । म नर्सलाई इशारा गर्थें, उनी पनि इसाना गर्थिन् रहनुभएन भनेर । अब बिस्तारै मैले बुझ्न थालें, किनभने मृत्यु हुने बित्तिकै आफ्नो मान्छे आउनुहुन्थ्यो । कसैले नमस्ते गर्ने, कोही रुन थाल्नुहुन्थ्यो तर कसैले पनि आफ्नो प्यारो मान्छेलाई अँगालो हाल्न सक्नुहुन्थेन ।
त्यो देखेर मेरो मनमा नानाथरिका कुरा खेल्दथ्यो र मौन रहेर मेरो आँखाबाट आँसु आफैं झर्दथ्यो ।
टेकु अस्पतालमा नर्सहरू पनि साह्रै मेहनती, सेवाको भावना भएका, सिरिन्जले दूध, दाल खुवाउने, बिरामीको सक्दो हेरचाह गर्ने । यसरी ८ दिनको भेन्टिलेटर बसाइपछि एक राति अचानक डा. अनुप आएर भन्नुभयो – आमा अब तपाईंलाई अर्को बेडमा सार्ने हो ।
म आत्तिएँ । उहाँले भन्नुभयो – आमा अलि सञ्चो भएको छ, त्यहाँ पनि भेन्टिलेटर अक्सिजन छ ।
मलाई बेड नम्बर २२ मा लगियो । त्यहाँ जम्मा ४ वटा बेड थियो । एउटामा म अरु ३ वटा । मैले सोचेको त्यहाँ देखिने दृश्य यहाँ नदेखिएला तर दैवलाई कहाँ मञ्जुर थियो । बिहान उठ्ने बित्तिकै यही क्रम थियो । यसरी मलाई ६ दिनपछि वार्डमा सारियो । वार्डबाट अन्त्यमा अक्सिजन लिएर हामी घर फर्कियौं, यसरी मेरो टेकु अस्पतालमा २७ दिनको बसाइ रह्यो ।
मैले कम समयमा धेरै अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा २७ दिनको अस्पताल बसाइमा थाहा पाएँ ।
अन्त्यमा डा. अनुपले मलाई प्रश्न गर्नुभयो – आमा के कोरोनाको महाकाललाई तपाईं बिर्सन सक्नुहुन्छ ?
मेरा आँखा रसाए । मैले भनें – जबसम्म मेरो सोच्ने शक्ति र ममा श्वास रहन्छ, तबसम्म म कदापी बिर्सन सक्दिनँ ।
यसरी म टेकु अस्पताल, अस्पतालका सबै टीम, डा. अनुप, डा. प्रमोद लगायत सबैलाई म हृदयदेखि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु । डा. अनुप हजुरले चालेका प्रत्येक कदममा सफलता मिलोस् भन्ने आशिर्वाद दिन चाहन्छु ।